Mesut Ozil oo xaqiijiyey inuusan xilli ciyaareedkan ka tagi doonin kooxdiisa Arsenal – Gool FM
(London) 15 Maajo 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Arsenal, Mesut Ozil ayaa soo jeediyey inaysan jirin fursad uu uga tagayo kooxdiisa inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Mustaqbalka Ozil ee kooxda Gunners ayaa su’aal la galinayey xilli ciyaareedka, waxaana la hadal hayey inuusan ka mid noqon doonin Arsenal inta lagu guda jiro ololaha soo aaddan ee uu kooxda hoggaanka u hayo macallin Unai Emery.
30 sano jirkaan ayaa heshiiskiisa haatan waxaa kaga harsan muddo labo sanadood ah, waxaana uu soo jeediyey inuu ku faraxsan yahay ka hoos ciyaaridda tababare Unai Emery.
“Haddii aan daacadda ka hadlo uma malaynayo inay jirto fursad aan ku tagayo, waxaan haystaa labo sanadood oo kale oo aan halkaan sii joogayo, markaas kaddib waxa dhaca ma’ahan wax gacmahayga ku jira, waan arki doonnaa, laakiin waan ku faanayaa inaan ka mid ah kooxda, aad ayaana ugu faraxsanahay dhabtii naadigan” ayuu Ozil u sheegay DAZN Dach.
“Haddii uu tababaruhu ila hadlo oo uu ii sheego inaan kulan ciyaareynin waa mid aan u baahanahay inaan aqbalo” ayuu hadalkiisa ku daray xiddiga reer Jarmal.
Ozil ayaa kaliya ciyaaray 24 ciyaarood 38 kulan oo Arsenal ay ciyaartay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii dhowaan dhammaaday ee 2018-19, isagoo dhaliyay shan gool, isla markaana abuuray labo gool oo kale.